ပင်လယ် buckthorn ထုတ်ယူ
၁။ ထုတ်ကုန်အမည် - လက်ဖက်စိမ်းအစိမ်း
ခရမ်းလွန်အားဖြင့် 10% -98% polyphenols
HPLC မှ 10% -80% catechins
HPLC မှ ၁၀-၉၅% EGCG
HPLC မှ 10% -98% L-theanine
3. အသွင်အပြင်: အဝါရောင်အညိုရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဒဏ်ငွေအမှုန့်ကိုချွတ်
5. အဆင့် - အစားအစာတန်း
6. လက်တင်အမည်: Camellia sinensis O. Ktze
7. ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: 25kg / စည်, 1kg / အိတ်
(အသားတင်အလေးချိန် ၂၅ ကီလိုဂရမ်၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၂၈ ကီလိုဂရမ်; ပလပ်စတစ်အိတ်နှစ်လုံးပါသည့်ကတ်ထူပြား - ထည်ဖြင့်ထုပ်သည်။ စည်အရွယ် - အမြင့် ၅၁၀ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၃၅၀ မီလီမီတာ)
(၁ ကီလိုဂရမ် / အိတ်တင်အိတ်၊ ၁.၂ ကီလိုဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန်၊ အလူမီနီယမ်သတ္တုပါးအိတ်ထဲထည့်ထားတယ်။ အပြင် - စက္ကူပုံး) အတွင်းပိုင်း - အလွှာနှစ်လွှာ)
၉။ အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း။ ညှိနှိုင်းရမည်
၁၀။ ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း - တစ်လလျှင် ၅၀၀၀ ကီလိုဂရမ်။
အခြားအစားအစာများသို့မဟုတ်သောက်စရာများလက်ဖက်ရည်ကြမ်းကဲ့သို့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသလား။ လက်ဖက်စိမ်း၏လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည်ရှေးခေတ်ကတည်းကပင်ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှစိတ်ကျရောဂါအထိကုသမှုအားလုံးကို အသုံးပြု၍ တရုတ်လူမျိုးများသိထားကြသည်။ သူမ၏ကျန်းမာရေးစာအုပ် - ကျန်းမာရေးဘ ၀ အတွက်သဘာဝလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သော Nadine တေလာကလက်ဖက်ခြောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကြာဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ယနေ့အာရှနှင့်အနောက်ဘက်ရှိသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုခြင်းသည်လက်ဖက်စိမ်းသောက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားကင်ဆာဌာနမှဂျာနယ်သည်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခု၏ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ခြင်းသည်တရုတ်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများရှိအစာအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလျော့နည်းစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ University of Purdue မှသုတေသီများကလက်ဖက်ရည်ကြမ်းတွင်ပါဝင်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုသည်ကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုတားဆီးပေးသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည် သုတေသနပြုချက်အရလက်ဖက်စိမ်းသောက်ခြင်းသည်စုစုပေါင်းကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုလျော့နည်းစေပြီးကောင်းမွန်သော (HDL) လက်စထရောနှင့်ဆိုးသော (LDL) ကိုလက်စထရောအချိုးကိုပိုမိုမြင့်မားစေကြောင်းဖော်ပြသည်။
၂။ Cardio ကာကွယ်မှု၊ သွေးကြောရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး
သွေးခဲခြင်းကိုတားဆီးရန် 5.Anti-platelet စုစည်းမှု
6.Kidney function ကိုတိုးတက်မှု
လက်ဖက်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပင်အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင်စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ယနေ့လက်ဖက်ရည်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးစားသုံးသည့်အဖျော်ယမကာဖြစ်ပြီးရေပြီးလျှင်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ သန်းပေါင်းရာနှင့်ချီသောလူများသည်လက်ဖက်ရည်သောက်ကြသည်။ လေ့လာမှုများအရလက်ဖက်စိမ်း (Camellia sinesis) သည်ကျန်းမာရေးအတွက်များစွာအကျိုးရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
လက်ဖက်ရည်အမျိုးအစားသုံးမျိုး - အစိမ်း၊ အနက်နှင့်အူလန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါခြားနားချက်လက်ဖက်ရည်လုပ်ငန်းများ၌ဘယ်လို၌တည်ရှိ၏။ လက်ဖက်စိမ်းကိုမသန့်ရှင်းသောအရွက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပိုလီဖီနောလ်ဟုခေါ်သောအစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးပစ္စည်းပမာဏအများဆုံးပါဝင်သည်။ Antioxidants ဆိုတာအခမဲ့ radikal တွေကိုတိုက်ဖျက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆဲလ်တွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်၊ ​​DNA ကိုပျက်စီးစေတယ်၊ ​​ဆဲလ်တွေသေစေတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်အများစုကအခမဲ့အစွန်းရောက်များသည်အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ကင်ဆာရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါအပါအဝင်ကျန်းမာရေးပြdevelopmentနာများစွာဖြစ်ပေါ်စေရန်အထောက်အကူပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လက်ဖက်စိမ်းရှိ polyphenols ကဲ့သို့သော antioxidants များသည်အခမဲ့အစွန်းရောက်မှုများကိုလျော့ပါးစေပြီး၎င်းတို့အားဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပျက်စီးမှုအချို့ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကာကွယ်နိုင်သည်။
ရိုးရာတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယဆေးများတွင်လက်တွေ့လေ့ကျင့်သူများသည်လက်ဖက်စိမ်းကိုစိတ်ကြွဆေး၊ Diuretic (ကိုယ်ခန်ဓာအရည်ပိုလျှံမှုကိုဖယ်ရှားရန်)၊ နို့တိုက်သတ္တဝါ (သွေးထွက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အနာများကိုကုသရန်) ကိုအသုံးပြုသည်။ လက်ဖက်စိမ်းကိုအခြားရိုးရာအသုံးပြုမှုများတွင်ဓာတ်ငွေ့ကိုကုသခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင့်သွေးသကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးခြင်း၊ အစာခြေခြင်းကိုအားပေးခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
လူများ၏လူ ဦး ရေကိုကြည့်သည့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအရလက်ဖက်စိမ်း၏ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများသည်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအထူးသဖြင့်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ လူ ဦး ရေအခြေပြုလေ့လာမှုများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူအမြောက်အမြားကိုလိုက်နာသည့်လေ့လာမှုများသို့မဟုတ်ကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများ၌နေထိုင်သောလူအုပ်စုများနှင့်ကွဲပြားသောအစားအစာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောလေ့လာမှုများဖြစ်သည်။
သုတေသီများကလက်ဖက်စိမ်းသည်လက်စထရောနှင့် triglyceride အဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည့်အကြောင်းအရင်းကိုမသေချာပါ။ လေ့လာမှုအရလက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည်အလားတူသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ တကယ်တော့သုတေသီများကတစ်နေ့လျှင်လက်ဖက်ရည် (၃ ခွက်) သောက်သုံးခြင်းဖြင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် ၁၁% အထိကျဆင်းသွားသည်ဟုသုတေသီများကခန့်မှန်းကြသည်။
ဆေးတောင့်များနှင့်အလုပ်လုပ်သော & ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောအဖျော်ယမကာများနှင့်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များကိုဆေးတောင့်များသို့မဟုတ်ဆေးပြားများအဖြစ်အသုံးပြုသည်
နောက်တစ်ခု: Griffonia မျိုးစေ့ထုတ်ယူ
Andrographis paniculata ထုတ်ယူ
Salvia Miltiorrhiza ထုတ်ယူ
Yerba Mate Extract ကို
Picrorhiza Kurroa ထုတ်ယူမှု, Hypericum Perforatum ထုတ်ယူ, Avena Sativa Beta Gucan, White ကမိုးမခအခေါက် Extract, Lagerstroemia Speciosa ထုတ်ယူမှု, ဝါးထုတ်ယူ,